GobackpackGo | ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားဘလော့ဂ်
SEO အကြံပေးချက်များ travelblog
Do နှင့် travelblog donts
သင့်ရဲ့ pagespeed တိုးမြှင့်
ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကို Booking တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
Blogger / ခရီးသွား Inf ည့်သည်များခရီးသွားခြင်း
သင်၏ travelblog ကိုမြှင့်တင်ပါ
Airbnb korting Krijg
Airbnb မှတဆင့် verhuren သိကောင်းစရာများ
အာရှတိုက်, နိုင်ငံများ, ထုိင္းႏုိင္ငံ
ချင်းမိုင်ရှိ Sunrise ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရှုမည်နည်း။
အပေါ်ကပုံက Wat Palad မှာ Sunrise ပါ
ချင်းမိုင်ရှိနေထွက်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဘယ်မှာလဲ။ ချင်းမိုင်မှာနေတုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုမေးပြီးနေထွက်ချိန်ကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေအံ့သြဖွယ်နေထွက်တဲ့နေရောင်ခြည်အချို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သင်သည်ဤစာမျက်နှာကိုရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၌ရှိသောမေးခွန်းနှင့်ထပ်တူထပ်မျှမေးခွန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ချင်းမိုင်ရှိနေထွက်ရာနေရာများမှာအဘယ်နည်း။
ဤ blog post နှင့် Chiang Mai အတွင်းနှင့်အနီးရှိ Sunrise အတွက်နေရာအချို့ပေးမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤတည်နေရာများသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောနေထွက်ဓာတ်ပုံများကိုအနားယူရန်သို့မဟုတ်ဖမ်းယူရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သူတို့အားလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အကြွင်းမဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ချင်းမိုင်ရှိနေထွက်ရာနေရာ အောက်ခြေမှာ <3
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက ဒီဇင်ဘာ 9,2019
Muay Thai ပညာရေးဗီဇာချင်းမိုင်
ငါလို Muay Thai ED ဗီဇာကိုရှာနေတာလား။ လုပ်ငန်းစဉ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပါရစေ။
ငါပြီးနောက် ချင်းမိုင်တွင် Muay Thai ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့သည် 2015 မှာငါပြန်သွားချင်တယ်၊ အဲဒီအတွက် Chiang Mai မှာ Muay Thai ED ဗီဇာရွေးချယ်မှုကိုကြည့်ပြီးအဲဒါကမင်းကိုလည်းကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Chiang Mai မြို့ဟောင်းရှိ Chiang Mai Muay ထိုင်းကျောင်းကိုကျွန်ုပ်သွားခဲ့ပြီးပညာရေးဆိုင်ရာဗီဇာရွေးချယ်မှုများကို Muay Thai ပညာရေးဆိုင်ရာဗီဇာ6လများ (သို့) 12 လများသို့စီစစ်ရန်။ သူတို့ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့အီးမေးလ်ကိုအရမ်းတုန့်ပြန်ကြပေမယ့်ဘလော့ဂ်ပိုစ့်ထဲမှာဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းရှင်းပြပါရစေ။
ဤဆောင်းပါးရှိဓာတ်ပုံများကိုချင်းမိုင်အခြေစိုက် Chiang Mai မှရယူသည် Glyly Esther ဘက်စုံဓာတ်ပုံဆရာ
သင် Muay Thai ED Visa ရလိုသောအကြောင်းပြချက်အချို့
သင်သည်အစပြုသူဖြစ်ပြီး Muay Thai ကိုအကောင်းဆုံးမှသင်ယူလိုသည်
မင်းကအလယ်အလတ်ရှိပြီးမင်း Muay Thai အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ချင်တယ်
မင်း Muay Thai ကိုလေ့ကျင့်ပြီးသင်ထိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ချင်တယ်
ED muay Thai Visa ရရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ ငါ CMMTG မှာလေ့ကျင့်ရေး pack ကိုသွား၏။ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားစဉ်အချိန်သည်ဒီဇင်ဘာလ 2019 ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲသွားနိုင်သော်လည်းမည်သည့်စျေးနှုန်းအတွက်သင်ရနိုင်မည်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားသည်။
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက ဒီဇင်ဘာ 1,2019
ချင်းမိုင်ရှိနေဝင်ချိန်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရှုရမည်နည်း။ ချင်းမိုင်တွင်နေထိုင်စဉ်ကျွန်ုပ်သည် Mysefl ကိုဤသို့မေးခဲ့ရာနေဝင်ချိန်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်သောနေရာများမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေဝင်ချိန်များကိုတွေ့ခဲ့သည်။ သင်သည်ဤစာမျက်နှာကိုရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၌ရှိသောမေးခွန်းနှင့်ထပ်တူထပ်မျှမေးခွန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ချင်းမိုင်တွင်နေဝင်ချိန်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာအဘယ်နည်း။
ဤ blog post နှင့်ချင်းမိုင်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်နေဝင်ချိန်အတွက်နေရာအချို့ပေးမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတည်နေရာငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြပြီးအပန်းဖြေသို့မဟုတ်စုံလင်သောနေဝင်ချိန်ဓါတ်ပုံတွေကိုဖမ်းယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသော။ သူတို့အားလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အကြွင်းမဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ချင်းမိုင်ရှိနေဝင်ချိန်နေရာ ပို့စ်ရဲ့အောက်ခြေမှာ <3
အစောပိုင်းငှက်လား ထွက်စစ်ဆေးကြည့်ပါ - ချင်းမိုင်ရှိအကောင်းဆုံးနေထွက်ရာနေရာများ.
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက နိုဝင်ဘာ 25,2019
ချင်းမိုင်ရှိရဟန်းတော်လမ်းကြောင်းရှာနေသည် သစ်တောမှတဆင့်ဒီအံ့သြဖွယ်တိုးမြှင့်မှုကိုမလုပ်ဆောင်ခင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဘုရားကျောင်းများကိုမကြည့်မီတောင်တက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုသိလိုပါသလား။
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက နိုဝင်ဘာ 7,2019
ထိုင်းဘာသာစကားသင်ခန်းစာများချင်းမိုင် - ပုဂ္ဂလိကကျူရှင်နှင့်သင်ခန်းစာ
နေစဉ် ချင်းမိုင်ငါပုဂ္ဂလိကထိုင်းဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Chanya နဲ့သူမကငါ့ကိုထိုင်းဘာသာစကားရဲ့အခြေခံကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာခဲ့တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့လေ့လာရတာကပျော်စရာပဲ။ ထိုင်းဘာသာစကားကိုလေ့လာခြင်းနှင့် Muay Thai တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ဘဝကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေသည်။ သင်ငယ်သောစကားစမြည်ပြောဆိုနိုင်ပြီးလူများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Chanya ဟာတခြားလူတွေကိုထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းသင်ပေးရတာအရမ်းစိတ်အားထက်သန်တယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ဘာသာစကားအသစ်ကိုယူရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော် Chanya သည်သင်ယူရန်လွယ်ကူစေသည်။
Chiang Mai တွင်သင်၏မှန်ကန်သောထိုင်းဘာသာစကားဆရာကိုရှာရန်နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောကျောင်းသားသစ်များရရှိရန်ကူညီရန်ဤ blogpost ကိုကျွန်ုပ်ထူထောင်ခဲ့သည်။ Win Win!
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက စက်တင်ဘာ 4,2019
အာရှတိုက်, ကမ္ဘောဒီးယား, ထုိင္းႏုိင္ငံ
စာရင်း - တိရိစ္ဆာန်များသုံးဆင်ဆင်ရန်း
သင်မသိလျှင်ဤစစ်ဆေးပါ ဆင်ဖော်ရွေသောပန်းခြံများ၏စာရင်း တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အာရှ၌။
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက သြဂုတ် 2,2019
အဆုံးစွန် Todo စာရင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်ချင်းမိုင်
အဆုံးစွန်သော Todo စာရင်းနှင့်ချင်းမိုင်အခြေစိုက်ချင်းမိုင်အခြေစိုက်ပုန်းရှောင်ကျောက်မျက်များ Muay Thai ကိုလေ့လာပါ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါဒီစာရင်းကိုမင်းနဲ့အတူဖန်တီးခဲ့တယ် ချင်းမိုင်တွင် todo နှင့်ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်များ။ ဟုတ်ပါတယ်ထင်မြင်ချက်များအမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်သင် Chiang Mai ၌သင်အကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများရှိပါကဤခရီးစဉ်သည်အခြားခရီးသွားများအတွက်ပိုမိုအဖိုးတန်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်မှတ်ချက်များတွင်သူတို့ကိုထားခဲ့ပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုလှပသော Chiang Mai <3 အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်အချိန်အလိုရှိ၏
ဆက်ဖတ်ရန် ပေါလုက ဇူလိုင်လ 29,2019
သြဇာလိုအပ်ပါသလား အွန်လိုင်းစီးပွားရေးပိုလုပ်နိုင်မလား။ ငါ့ကိုငှားပါ
ကျွန်ုပ်သည်အမ်စတာဒမ်မှအလွတ်တန်းဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူ / WordPress တီထွင်သူ / SEO / ဦး ဆောင်သည့်မျိုးဆက်အထူးကုဖြစ်ပြီးစွန့်စားခန်းများကိုသွားလေ့ရှိသည်။
သင်၏စီးပွားရေးကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မြှင့်တင်ပါ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ၊ အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ ယခုအဆက်အသွယ်ရယူပါ။
သင်၏ travelblog ကိုမြှင့်တင်ပါ။
Guestblogs များသည်သင်နှင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာဖတ်ပါ guestblogs ၏အကျိုးကျေးဇူးများ။
$ 40 Airbnb ကူပွန်ကိုရယူပါ။
အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုနှိပ်ပါ။ သင်သည် Airbnb အတွက် $ 40 ကူပွန်ကိုရလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Instagram ဓာတ်ပုံ
Instagram ပေါ်ရှိ Gobackpackgo ကိုလိုက်နာပါ
မူပိုင် 2014-2021 GO ကျောပိုးအိတ် GO - ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည် Paul Ram & လိုဂိုဒီဇိုင်း Jordi
ကျော် 30.000 မှလူများသည် Gobackpackgo ကိုလိုက်ပြီးနေကြပြီ Facebook နှင့် Instagram ကိုပေါ်မှာ။
နောက်ကိုလိုက်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Instagram ပေါ်မှာ Gobackpackgo
နှင့် Facebook ပေါ်တွင် Gobackpackgo ကဲ့သို့လွယ်ကူသော